तपाईसँग पैसा टिक्दै टिकेन ? अपनाउनुहोस यस्तो उपाय, चमत्कारीक बचत हुनेछ – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/तपाईसँग पैसा टिक्दै टिकेन ? अपनाउनुहोस यस्तो उपाय, चमत्कारीक बचत हुनेछ
काठमाडौँ । पैसा कमायो तर गुमिहाल्यो भने त्यसको महत्व नै छैन । आजको समयमा पैसाको बचत गर्न नसक्ने मानिस समाजमा गनिदैन नै । आजको समयमा सबैभन्दा बढी मेहनत पैसा कमाउनमा लाग्छ । यहाँ सम्म कि यसको महत्व हाम्रो जिवनमा कति सम्म रहन्छ कतिपयलाई ख्याल नै हुदैन । तर यति मेहनत गरेर कमाएको पैसा हाम्रो पर्समा टिक्दैन, यसैले कुनै समयमा ठुलो समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।
यस्ता प्रकारका चिजहरुले मानव जिवनमा महत्वपूर्ण स्थान कायम गरेका हुन्छन् । यो संगसंगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने पैसा, शायदै अब त बुझिसक्नु भयो होला हामी पर्स र पैसाको बिचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड्दै छौ । यी सबै चिजहरु हुदा हुदै पनि पर्समा पैसा रहन सकेन भने सायदै तपाईलाई खिन्नता उत्पन्न हहुन सक्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्राय मानिसहरु पर्सको प्रयोग गर्दैनन् । किनकी पर्समा पैसा राख्दा सह रंहदैन, अथवा पैसाको बचत हुन सक्दैन, खर्च हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । जसकारण पर्स प्रयोग गर्न उनिहरुलाई त्यती उचित लाग्दैन । वास्तु शास्त्र ले पनि यसलाई दरिद्रताको एक कारण मान्दछ ।
वास्तुसास्त्रका अनुसार तपाई आफ्नो पर्समा माता लक्ष्मीको एउटा तस्वीर राख्नुहोस्, यस्तो पनि मानिन्छ कि माता लक्ष्मीको तस्वीर राख्नाले लक्ष्मी प्रसन्न भएका बेला तपाईको पर्समा पनि आउन सक्छीन् । तपाईको पर्स कहिल्यै खालि हुदैन । यदि यसो गर्दा पनि अधिक मात्रामा खर्च भइरहेको छ भने केही चुट्की चामल राख्नुहोस यसो गर्दा तपाईको अनावस्यक खर्च हुन पाउदैन ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार अर्को उपायपनि बताइएको छ कि तपाईको मनोकामना एउटा रातो कागजमा लेखेर रातो रंगको खाममा राखेर पर्समा राख्नुहोस, यसले तपाईको मनोकामना पूरा हुने संभावना रहन्छ ।
साङ्ग्ला, सर्प को बि ष मार्न देखि लिएर म स्तिष्कको क्षमता बृद्धि गर्नसम्म अत्यन्तै उपयोगी तेजपत्ता जान्नुहोस्